यस कारण पनि अब जानू पर्दैन काठमाडौं.. - Samaj Patra
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवाहरुलाई नै लछित गरेर भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल ब्यवसायिक रुपमा संचालित छ ।
श्रम समेत अब भौरहवामै राखिने र रोजगारमा जाने नेपाली युवाहरुलाई काठमाडौं जानू पर्ने बाध्यता हट्ने बताइन्छ । यता सबै सुबिधा दिए बिश्वका चर्तित एयरलाइन्स कम्पनी उडान भर्न इछुक देखिएका छन् ।
सोमवारबाट सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्नका लागि कतिपय खाडी देश र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेका मुलुकका वायुसेवाहरूले चासो देखाएको भएपनि अन्तिम निर्णय भइ नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
हाल त्यहाँ कुवेतको जजिरा एअरवेजले हप्ताको तीन उडान गर्ने निश्चित भए अनुसार उद्घाटनको दिन २ जेठदेखि उडान सुरु गरिसकेको छ।
एशियाली विकास ब्याङ्कको ऋण एवं ओपेक फन्ड र नेपाल सरकार सहितको लगानीमा करिब साढे नौ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर उक्त विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमवार उद्घाटन गरेको उक्त विमानस्थलको निर्माणको जिम्मेवारी एउटा चिनियाँ कम्पनीले पाएको थियो।
कुन कुन वायुसेवाले चासो देखाएका छन्?
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द दाहालले विभिन्न देशका वायुसेवाहरूले उडानका लागि चासो देखाएको र आगामी दशैँसम्ममा सो विमानस्थलबाट दैनिक रूपमा दशदेखि १५ वटा उडान हुने अपेक्षा आफूहरूले राखेको बताए।
उनी भन्छन्, “कुवेतको जजिरा एअरलाइन्सले हप्ताको तीन दिनका लागि उडानको तालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। मलाई लाग्छ नेपालका जुन वायुसेवाहरू छन्, नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एअरलाइन्स र बुद्ध एअरलाइन्सले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहनुभएको अवस्था पनि छ।”
उनी थप्छन्, “एअर अरेबिया, भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्याण्डको स्माइल, ओमानको सलाम एअर लगायतका विभिन्न देशका एअरलाइन्सहरूको संस्थाले पनि करिब दुई साताअघि यहाँ छलफल गर्नुभएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ अब एक दुई महिनाभित्र उडान अवतरणका लागि स्वीकृति लिन चाहनुहुन्छ।”
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले बीबीसीसँग भने, “धेरै कम्पनीहरूले चासो राखेर हामीसँग सोधिरहेका छन् तर लिखित प्रस्ताव हालसम्म अन्यले पठाएका छैनन्।”
“नेपालमा उडान गरिरहेका अधिकांश विमान कम्पनीले हामीसँग उडानबारे सोध्ने काम भने गरेका छन्।”
उनका अनुसार श्रीलङ्काको एउटा सहित केही कम्पनीले उडानका लागि विमान लिएर आउने बताएका थिए।
तर त्यसबारे हालसम्म औपचारिक प्रस्ताव नआएको कर्णले जानकारी दिए।
खाडी क्षेत्र जाने कामदार र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य
मूल रूपमा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत कामदार र धार्मिक पर्यटन अन्तर्गत लुम्बिनीको भ्रमण गर्न इच्छुक बौद्ध धर्मावलम्बीलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य उक्त विमानस्थलले लिएको बताइन्छ।
महाप्रबन्धक दाहाल भन्छन्, “मुख्य रूपमा खाडी क्षेत्रकै विमान कम्पनीहरूको चासो हो यस क्षेत्रमा। त्यसबाहेक बुद्ध धर्मावलम्बी भएका देशहरूको मुख्य आकर्षण यो विमानस्थल बन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।”
चासो देखाउने विभिन्न वायुसेवा कम्पनीमध्ये साउदी अरेबियाको एअर अरेबिया पनि एक हो जसको तयारी अरू एअरलाइन्स भन्दा अलिकति अघि बढिसकेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निमित्त निर्देशक श्यामकिशोर शाह भन्छन्, “यतिबेलाबाट उडान थाल्ने भन्ने नभइसकेको भएपनि एअर अरेबियाका तर्फबाट तयारी अघि बढेको हामीले बुझेका छौँ। उहाँहरूले बजार विस्तारका लागि अध्ययन गरिरहेको र विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरूसँग उडान सञ्चालनबारे छलफल गर्नुभएको छ।”
उनले थपे, “कुनै पनि वायुसेवाले हामी फलानो दिनबाट उडान गर्छौँ भनेपछि बल्ल अनुमतिको प्रक्रियामा त्यो विषयले प्रवेश गर्छ।”
नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले उक्त विमानस्थलबाट उडान गर्नेबारे ठोस प्रस्ताव नगरिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा रहेको हिमालयन एअरलाइन्सले काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्न नसकेको खण्डमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्ने जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
वायुसेवालाई आकर्षण गर्न के गर्न लागिएको छ?
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक दाहालले विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई नेपालको दोस्रो विमानस्थलमा आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत सुविधाहरू दिन लागिएको सुनाए।
उनी भन्छन्, “एक वर्षसम्म अवतरण शुल्क, सुरक्षा शुल्क र सञ्चार शुल्कहरू शत प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ। मलाई लाग्छ त्यो शत प्रतिशत छुटको व्यवस्थाबारे निर्णय हुन्छ। यो हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले यहाँ सहुलियतमा अवतरण गर्ने र पार्किङ गर्ने अवसर पाउँछन्।”
दाहालले भारतको उत्तर प्रदेशका श्रमिक एवं पर्यटकहरूले पनि नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्नसक्ने अपेक्षा सुनाए।
तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनी भ्रमण गर्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उनको प्राथमिकतामा नपरेको पाइएको थियो।
उनी कुसीनगरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेर त्यहाँबाट सोझै बुद्ध जन्मस्थान लुम्बिनी आएका थिए।
Previous Article कतारमा ढिला गाडी चलाए 500 रियाल जरिवाना, यस्तो छ कारबाही..
Next Article कतारको राम्रो कम्पनीको लागी नेपाली सेक्युरिटी गार्डको माग, तलब यतिधेरै